I-Bearberry Meadows - Mica Suite - I-Airbnb
I-Bearberry Meadows - Mica Suite
Tête Jaune Cache, British Columbia, i-Canada
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Elli
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 28.
* *Ngenkathi uzoba nesakho lesivakashi esiyimfihlo, kunezikhala ezabelwana ngazo. Sicela ufunde incazelo ngezansi.**
Le suite ehlanzekile, enethezekile futhi enhle ngaphakathi kwendlu yethu yelogi inikeza konke okudingayo ukuze uhlale uphumule. Inombhede wendlovukazi, igumbi lokugezela le-ensuite, nekhishi layo elizimele.
Jabulela ukuzola kanye ne-Mountain View enhle efasiteleni lakho nasengadini yakho.
I-Mica Suite ingelinye lamagumbi amabili azimele asezingeni eliphansi lekhaya lethu lamalogi, ngalinye lihlotshiswe ngamakhishi kanye nezindlu zokugezela eziyi-ensuite. Ilingana ngokunethezeka okubili (umbhede wendlovukazi) futhi inikeza ukufinyelela engadini enendawo yokuhlala, eyabelwe phakathi kwama-suites angu-2, nokubukwa okuhle kweNtaba.
Izivakashi zethu zijabulela ngempela ukukwazi ukulungisa ukudla kwasekuseni, ukudla kwasemini kanye nokudla kwakusihlwa ekhishini lazo le-suite yabo kanye/noma ku-BBQ ngaphandle, okwabelwana ngayo phakathi kwama-suites angu-2.
ubusuku obungu-7 e- Tête Jaune Cache
4.90 · 148 okushiwo abanye
Indlu yethu yezivakashi itholakala endaweni engamahektha angu-4 endaweni yasemakhaya enemibono emihle yezintaba. Ukusuka lapha ungaba nohambo olufushane uye olwandle oluncane, noma uye endaweni yokudlela encane ebukeka kahle, kokubili emfuleni iFraser. Noma vele uhlale engadini yethu futhi ujabulele ukushona kwelanga okuhle. Kufanele uthande ukuhlala kwezintaba ezinokuthula!
Le ndawo iphinde inikeze imizila yokuhamba izintaba, imigwaqo yebhayisikili, i-white water rafting, ukubona, ukubuka izilwane zasendle. I-Mount Robson Provincial Park iyimizuzu eyi-10 kuphela yokushayela.
Ungaphinde uye ku-X-country skiing noma u-snow shoeing usuka emnyango wakho. Eminye imisebenzi yasebusika kule ndawo ihlanganisa:
i-dog sledding, ukushushuluza kwekati eqhweni, ukushushuluza nge-heli kanye nokuhamba ngeqhwa.
Sihlala esitezi esikhulu ngaphezu kwendawo yezivakashi futhi ngokuvamile sitholakala ngemva kuka-6pm Pacific Daylight Time.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tête Jaune Cache namaphethelo